Safarka UK iyo USA wuxuu u baahan yahay tijaabo COVID-19 oo taban
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Safarka UK iyo USA wuxuu u baahan yahay tijaabo COVID-19 oo taban
Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • News • Dib-u-dhiska • Ammaanka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka UK • Wararka Mareykanka
Maanta, Madaxweyne Trump wuxuu qaadayaa tallaabo kale oo uu ku ilaalinayo caafimaadka dadka Mareykanka asaga oo u baahan rakaab diyaaradeed oo ka imanaya Boqortooyada Ingiriiska (UK) si ay u tijaabiyaan diidmo, iyada oo loo marayo baaritaanka PCR ama Antigen, oo aan ka badnayn 72 saacadood ka hor safarka UK ee Mareykanka.
Maamulka caafimaadka bulshada ee Boqortooyada Midowday ayaa dhowaan ku dhawaaqay daah-fur nooc cusub oo ah SARS-CoV-2. Fayrasyadu si isdaba joog ah ayey isu beddelaan iyada oo loo marayo isbeddellada, falanqaynta hordhaca ah ee Boqortooyada Midowdayna waxay soo jeedinaysaa in noocyadan cusub laga yaabo in ay gaadhaan ilaa 70% in ka badan oo la soo gudbin karo marka loo eego noocyadii hore ee wareegayay.
14-kii Maarso, Madaxweyne Trump wuxuu soo saaray a War-saxaafadeedka Madaxweynaha in la joojiyo soo gelitaanka dadka ajaanibta ah ee booqday Boqortooyada Ingiriiska 14-kii maalmood ee la soo dhaafay. Tani waxay yareysay safarka hawada ee Mareykanka ee ka imanayay Boqortooyada Ingiriiska qiyaastii 90%. Shuruuddan tijaabinta dheeriga ah waxay xoojineysaa ilaalinteena dadweynaha Mareykanka si loo wanaajiyo caafimaadkooda iyo nabadgelyadooda loona hubiyo safarka caalamiga ah ee mas'uulka ka ah. Amarku wuxuu la jaan qaadayaa hagida tijaabada CDC ee hadda jirta iyo hagista Waaxda Gaadiidka / Maamulka Duulista ee Federaalka ee dukumintiga "Wadada Soo-kabashada".
Amarkan cusub wuxuu la jaan qaadayaa talaabooyinka ilaa hada la qaaday si kor loogu qaado awoodeena inaan ku ogaan karno kuna koobno ​​COVID-19 si firfircoon oo dagaal badan.
Rakaabka waxaa laga rabaa inay helaan a baaritaanka fayraska (yacni, baaritaanka infekshinka jira) 3 maalmood gudahood kahor intaysan ka duulin UK una safrin Mareykanka, una keen dukumenti qoraal ah natiijada baaritaanka shaybaarkooda (nuqul adag ama elektaroonig ah) shirkadda. Diyaaraduhu waa inay xaqiijiyaan natiijada baaritaanka xun ee dhammaan rakaabka kahor inta aysan fuulin. Haddii rakaabku doorto inuusan imtixaan qaadin, diyaaradda waa inay u diiddaa raacitaanka rakaabka.
Amarkan waxaa la saxiixi doonaa berri, 25-ka Diseembar, wuxuuna dhaqan galayaa Diseembar 28, 2020.